Tratra an-tsokosoko amin'ny tanany manokana
Ny famoronana zavatra amin'ny tananao dia mahavariana sy mahasoa foana. Ny tratra anaty tratra dia hanome anao manokana ny asa, fa zavatra iray tsy misy afa-tsy ety ivelany, izay ahafahanao mametraka na mampiseho zavatra mendrika ho an'ny rehetra.
Isika no tompon'ny ampahany lehibe indrindra . Ny fototry ny tratra dia natao araka ny fitsipika mitovy amin'ny fahitalavitra . Mba hanaovana izany, dia naka sy nanapaka ny solaitra kely izahay, izay nalaina tany am-piandohana ary nampiharina tamin'ny solaitrabe. Ny fototra dia ahitana fonosana horita roa, roa tontonana, roa tapa-kazo ary legana maro izay manasaraka ny habaka.
Niches . Ao amin'ny tapany afovoany dia mametraka roa niches isika, ary amin'ny lafiny iray dia mampiditra iray isika. Ny ampahany tsirairay dia tokony hiparitaka amin'ny lakaoly ary avy eo mihidy.
Ny ampahany ambony . Mila birao efatra ianao izay mila atao amin'ny taratasy mivalona. Eo amin'ny lafiny tsirairay dia takiana ny hametraka seza enina ary hampifandray ny tampon'ny solaitrabe. Ny fonosana rehetra dia tokony ho rakotra kitay hazo. Ataovy ny famonoana farany.
Fanoroana fasad . Takelaka roa mitovy habe 15 santimetatra no tokony hiorina eo ambony sy ambany ambany amin'ny cabinet, ary koa eo amin'ny lafiny roa. Ny fonja niches sy ny singa havanana dia mihidy amin'ny fisaka misy 5 cm ny sakany.
Mamokatra varavarankely mihidy isika . Amin'ny fampiasana ireo lainga ireo, dia mampifandray efatra amin'ny 15 cm ny savaivay. Manakatona ny banga tsirairay izahay miaraka amin'ny vombony, manala ny morontongotr'ireo varavarana.
Sary hosodoko . Ny fasadina sy ny fisaka voasokitra amin'ny loko fotsy. Ho an'ny faritra rehetra sisa dia misy tasy manokana amin'ny aloky ny mazava. Avelao ny loko sy ny tain-kailikilina, hizaha ny rindrina rehetra miaraka amin'ny paosin-dabozia ary hanatanteraka sehatra iray hafa amin'izany fomba izany.
Sary hosodoko . Ny singa tsirairay amin'ny metaly mba hampifandraisana ny rafitra fitifirana dia alaina amin'ny loko mainty.
Ny zoro ambany . Eo ambany elanelan'ny rafitra, tokony hampidirinao ny angom-pahefana izay hanao fihenan-tsofina, mba hisakanana ny varavarana tsy hanokatra velively.
Fanohanana ambony . Amin'ny fanohanana ambony dia tokony hiditra amin'ny kodiarana ny kodiarana. Ampifanarahinay amin'ny boloky lava sy ny fantsom-bilona vita amin'ny metaly izahay. Ny halaviran-dalana avy amin'ny lafiny iray amin'ny fanohanana dia tokony 4 cm, ary avy eny an-tampony hatrany am-piandohan'ny boards ho an'ny fanohanana - 4.5 santimetatra.
Miara-miasa izahay . Ilaina ny miala amin'ny 5 cm eo am-piandohana ary mametraka ny takelaka amin'ny metaly amin'ny alàlan'ny basy. Ao amin'ny ampahany ambony, dia mila manitsy ilay kodiarana ianao, izay mandeha amin'ny fanohanana.
Noho izany, manana varavarana roa sy efamira telo isika. Ny singa tsirairay tsirairay dia afaka misokatra sy miharihary amin'ny fotoana rehetra. Manana akanjo vita amin'ny kiraro amin'ny tanantsika manokana isika, izay afaka manamboatra ny endriky ny trano rehetra tsy misy fanelingelenana ny rafitra manontolo.
Ny famolavolana ny vata-trondro dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny fampiasana teknika hosodoko. Izany dia mitaky loko acrylic sy borosy. Raha araka ny fahamendrehany, ny tratrany dia afaka hosoloina tanteraka tanteraka na ny mombamomba azy tsirairay. Mofomamy ny tratrany amin'ny tananao manokana dia tsy sarotra mihitsy: aorian'ny fampiharana ny loko lehibe indrindra amin'ny loko, ny lamina dia ampiharina avy any ambony. Noho izany, misy stencils manokana mivarotra. Eo am-pamaranana, esory ny akanjo miaraka amin'ny fitaovana fiarovana manokana.
Vato anaty trano
Socket amin'ny biriky 2
Ny fitaovan'ny ankizy avy amin'ny plywood
Tao anaty trano manokana
Ny taombaovao amin'ny tananao
Ahoana no fomba handraisana orana any amin'ny firenena?
Bioparox nandritra ny fitondrana vohoka
Ny saosisy vita amin'ny taovam-pananahana - ny fomba tsara indrindra hanaovana sausages ao an-trano
Ny fanambaràna indray ny fanahy - porofo
Trosa ho an'ny solomaso - fitaovana maoderina ho an'ny vehivavy modely maoderina
Kolontsaina miteny sy fifandraisana amin'ny orinasa
Ahoana ny fomba hitazonana ilay bandy?
Ireo olo-malaza ireo dia mandany ny fiainany manontolo miaraka amin'ny hairaha!
Miainga any aoriana any amin'ny akquarium amin'ny tananao
Pannelopenia amin'ny saka
Seabuckthorn amin'ny fitondrana vohoka
Frogs Aquarium - endri-panompoana sy fikarakarana
Fanomezana ho an'ny lohan'ny Taombaovao
Ny aty amin'ny aty
Takelaky ny rindrina amin'ny varavarankely plastika
Diphtheria - soritr'aretina
Decoupage amin'ny hoditra
Pancakes amin'ny yogourt tsy misy atody - fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo matsiro mahandro sakafo